(AKHRISO)-Khilaafka ka taagan goobta lagu qabanayo cod u qaadida Mooshinka Jawaari | Puntland
(AKHRISO)-Khilaafka ka taagan goobta lagu qabanayo cod u qaadida Mooshinka Jawaari
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda xodxodasho iyo kala jiidjiidasho la kala jiidjiidanayo xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya, ayadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ku saabsan mooshinka codka kalsoonida la doonayo in loogu qaado guddoomiyaha Baarlamaanka.
Guddoomiye Jawaari ayaa la sheegay in uu horay beesha caalamka uga codsaday in codeynta mooshinka aan lagu qaban xarunta golaha shacabka kadib baqdin laga qabay in wax is daba marin ay dhacdo.
Xildhibaanada difaacaya jawaari ayaa kalsooni daro dhanka ammaanka ah ka muujiyay xarunta golaha shacabka oo la geeyay ciidamo cusub oo ammaaneekada kala wareegay ciidankii horay ugu sugnaay xarunta golaha shacabka.
Xildhibaanada difaacaya Jawaari ayaa dalbanaya in codka mooshinka lagu qaado hoolkii ay ka dhacday doorshadii madaxweynaha bishii Febraayo 2017, ee gudaha xerada Afisiyoone xubnaha beesha caalamkana ay goob joog ka noqdaan sida ay u dhaceyso codeynta mooshinka.
Guddoomoye Jawaari laftiisa wuxuu AMISOM ka codsaday in codaynta mooshinka lagu qabto gudaha xerada Afisiyoone isagoo ku doodaya in ammaanka xarunta golaha shacabka aan hadda la isku haleyn karin.
Xildhibaanada Mooshinka wada iyaga waxa ay ku doodayan in codeynta mooshinka ay ka dhacdo xarunta golaha shacabka maadama hadda aysan jirin sabab keeni karta in xarunta golaha shacabka laga qaxo oo xarumo kale ay xildhibaanadu ku shiraan oo codeynta mooshinka ay ka dhacdo.